၂၀၁၈ ခုနှစ်ကုန်ပစ္စည်းလက်လီအရောင်းပြေလည်သွားပြီလား။ ဒီမှာသိမ်းဆည်းနည်း | Martech Zone
2018 The Year လက်လီသေပါသလား ဒီမှာသိမ်းဆည်းနည်း
တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 16, 2018 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Jon Croy ပါ
နှလုံးသားရှိကလေးများနှင့်ကလေးငယ်များသည်လည်းထိုအရာကို ၀ မ်းနည်းစွာခံစားခဲ့ရသည် Toys 'R' Us ၏ကျဆုံးခြင်း, ကစားကွင်းအပေါ်သီးသန့်အာရုံစူးစိုက်သောစက်မှုလုပ်ငန်းအခိုင်အမာနှင့်နောက်ဆုံးကျန်ရှိသောလက်လီကွင်းဆက်။ မိဘများအတွက်လွမ်းဆွတ်မှုနေရာ၊ ကလေးများအတွက်အံ့သြဖွယ်ရာနိုင်ငံတစ်ခု - လက်လီရောင်းချသောကုမ္ပဏီကြီးသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ကြောင်းစတိုးဆိုင်ပိတ်သိမ်းမှုကြေငြာချက်ကမျှော်လင့်ချက်အားလုံးကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက Toys 'R' Us ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ပါတယ်.
ကစားစရာသိုလှောင်ထားသောစူပါစတိုးသည်လက်လီအရောင်းအဝယ်ထောင်ချောက်များ၏သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ချေ။ Cushman & Wakefield ကအမေရိကန်ကခန့်မှန်းသည် စတိုးဆိုင်ပိတ်ပစ် 33 ခုနှစ်တွင် 2018% မြင့်တက်ပါလိမ့်မယ်, ထက်ပိုမို 12,000 တည်ထောင်ခြင်းဖျက်သိမ်း
RadioShack သေဆုံးခြင်း၊ JCPenney ၏ကျဆင်းမှုနှင့်မရေမတွက်နိုင်အောင်အခြားသူများ၏ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုအကြားစားသုံးသူများသည်ဖျားနာနေကြသည်။ စတိုးဆိုင်ပိတ်သိမ်း ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်ခေါင်းစဉ်များ။ Sears, Claire's နှင့် Foot Locker တို့သည်ဆိုင်များပိုမိုဖွင့်လှစ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသဖြင့်အုတ်ခဲနှင့်မော်တာလက်လီရောင်းချသူများအတွက်အဆင်မပြေပါ။
အခြေအနေကိုကြည့်လျှင် Don McLean နောက်ခံတေးဂီတကိုတစ်ချိန်လုံးသီဆိုရန်သွေးဆောင်နိုင်သည်။ ၃၁ ဖြစ်သည် လက်လီသေဆုံးသည့်နှစ်! ဒါပေမယ့်အချက်ပေးသံကိုတော့မကြားရသေးပါ။ စားသုံးသူများ၏စျေး ၀ ယ်မှုအတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲစေသည့်အပြောင်းအလဲများစွာကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်လိုသောလက်လီအရောင်းဆိုင်များအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်။
လက်လီရောင်းချသူများအနေဖြင့်ယင်းကိုကျော်လွှားရန်ရုန်းကန်နေရသည် အမေဇုံအကျိုးသက်ရောက်မှု (အခြားအချက်များအကြား) သို့သော်ပြောင်းလဲရန်အချိန်ရောက်ပြီ။ dot-com ကုမ္ပဏီကြီးသည်ရိုးရာဆိုင်များအားကြီးမားသောပြိုင်ဘက်တစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းလက်လီအရောင်းဆိုင်များသည်သူတို့၏အစစ်အမှန်အလားအလာကိုမသိနားမလည်နိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။
လက်လီကဏ္ sector ၏အကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အုတ်နှင့်အင်္ဂတေကစားသူများသည်စတိုးဆိုင်ရှိအခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများကိုထိရောက်စွာရောင်းခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြားကွာဟချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အသင့်ပြင်ဆင်ထားရမည်။
ဝယ်လိုအား vs. ပိုက်ဆံအိတ်
ဤဂန္ထ ၀ င်ပြproblemနာသည် Toys 'R' Us နှင့် Sports Authority ကဲ့သို့သောအကြိမ်ကြိမ်အနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့သည်။ ဖြစ်ရပ်မှန်အချက် - Toys 'R' Us ကိုသင်ဘာကြောင့် ၀ ယ်သည်ကိုသင်စဉ်းစားဖူးပါသလား။
အရွယ်ရောက်သူများသည်လက်ဆောင်များဝယ်ရန်ထိုတွင်သွားကြသည် (“ Demand”) ။ သို့သော်ပိုက်ဆံအိတ်သည် ၀ ယ်လိုအား၏မူလရင်းမြစ်နှင့်ကွဲလွဲနေသည့်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဒီဂရီဖြစ်သည်။ အဆိုပါပိုက်ဆံအိတ်စတိုးဆိုင်သို့သွားကြဖို့အလိုဆန္ဒမရှိပါ - အဲဒါကအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အားကစားရာသီသစ်အတွက်ဖောက်သည်များမကြာခဏဝယ်ယူလေ့ရှိသောကြောင့်အားကစားအာဏာပိုင်များသည်အလားတူပြproblemနာမျိုးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်သူတို့သည်စျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာသည်ကိုမြင်။ ဆက်လုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။
ပျင်းစရာကောင်းတဲ့မိဘတွေကသူတို့ရဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူအချိန်ကိုသတ်ချင်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်။ စတိုးဆိုင်တစ်ခုခုကို ၀ င်ရောက်တဲ့အခါပိုက်ဆံနဲ့ခွဲခွာဖို့တိကျတဲ့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ မိဘများအနေဖြင့်ဈေးသက်သာစွာ ၀ င်ထွက်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်လျက်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအန္တရာယ်ရှိသည်။
မျှော်လင့်ထားသည့်မိသားစုများမှာချွင်းချက်ဖြစ်သည်။ မိဘအသစ် (“ ပိုက်ဆံအိတ်”) သည်သူတို့လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကို ၀ ယ်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ သို့သော်ကလေးအလင်းရောင်အသစ်တွင်၎င်း၏အကန့်အသတ်များရှိသဖြင့်၊
လက်လီရောင်းချသူများသည်စိတ်အားထက်သန်သောဝယ်လိုအားနှင့်အတူခံနိုင်ရည်ရှိသောပိုက်ဆံအိတ်ကိုစုစည်းရန်အခွင့်အလမ်းများကိုမကြာခဏလက်လွှတ်ကြသည်။ ၎င်းသည်လွယ်ကူပုံရသည့်အချိန်များရှိသော်လည်း (ဥပမာ - မျှော်မှန်းထားသောမိသားစုများ)၊ ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ဝယ်လိုအားကိုပိုမိုနီးကပ်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်
သုံးစွဲသူများသည်မြေပုံများ (သို့) ဒီဂျစ်တယ်စျေးဝယ်စာရင်းများကဲ့သို့ပိုမိုထိရောက်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်စျေးဝယ်ခြင်းကိုကူညီနိုင်သည့်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်း
တိုးတက်မှုအတွက်စတိုးဆိုင် layout ကိုညှိ ။ စတိုးဆိုင်၏
နောက်ဆုံးတွင်၊ သင့်တွင်ဖောက်သည်များပြတ်တောက်နေသောစတိုးဆိုင်များမှ ၀ မ်းနည်းခြင်းမရှိသော ၀ ယ်သူတစ် ဦး ရှိပါက၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ဝယ်ယူမှုကိုအချိန်ဆွဲရန်နှင့်ဒုတိယခန့်မှန်းရန်အလားအလာနည်းသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းမှုသည်ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ။ လက်လီအရောင်းဆိုင် X ကစိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုလို့ထင်လား။ စားသုံးသူများ စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုလို့ထင်ခဲ့တယ် သူတို့သည်ပြင်ပယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုတိုးပွားစေသည်။
Toys 'R' Us နှင့်အားကစားဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များအားဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံရန်နှင့်သူတို့၏စျေးဝယ်သောအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပိုမိုပေါင်းစည်းရန်အခွင့်အရေးရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကနောက်ဆုံးမှာမအောင်မြင်ပေမယ့်ရလဒ်တွေကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားကြပါပြီနိုင်ဘူး။
အားကစားအာဏာပိုင်: မိဘတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်၍ ကျွန်ုပ်၏ကလေးအားကစား၊ လိဂ်နှင့်အသင်းကိုကြေငြာပြီးရရှိနိုင်သည့်ပစ္စည်းများအတွက်အကြံပြုချက်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ကစားစရာ 'R' Usအခုတော့ဒီနေရာမှာကလေးတွေဟာကစားစရာတိုင်းကိုလှန်လှောကြည့်နိုင်တဲ့ဆန္ဒစာရင်းတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ပြီးအက်ပလီကေးရှင်းကိုအီးမေးလ်၊ လူမှုရေးမီဒီယာစသည်ဖြင့်အမေနှင့်အဖေသို့လက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မွေးနေ့များ၊ အားလပ်ရက်များနှင့်အခြားအထူးအခါသမယများအတွက်ရိုးရှင်းသော်လည်းတောက်ပသောစျေးဝယ်ဖြေရှင်းချက်ကိုပေးနိုင်သည်။
Staples / အခြားရုံးသုံးဆိုင်များ: ကလေး၏အတန်းနှင့်အတန်းစာရင်းကိုကြေငြာပြီးနောက်အလိုအလျောက်ထုတ်ပေးသောသက်ဆိုင်ရာကျောင်းအထောက်အပံ့များအားလုံး၏စာရင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ In-store pickup နှင့်အတူဤအင်္ဂါရပ်သည်အလုပ်များသောမိဘများအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအရာဖြစ်လိမ့်မည်။
လက်လီရောင်းချသူများအနေဖြင့်စတိုးဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်၏အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်မပြုကြပါ အားလုံး စားသုံးသူကိုရန်။ စတိုးဆိုင်များသည်ဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်သော်လည်းစနစ်တကျညံ့ဖျင်းခြင်း၊ လမ်းပြရန်ခက်ခဲပြီးအလွန်အမင်းမလုံလောက်မှုများဖြစ်သည့်အခါ၎င်းတို့သည်ထူးခြားသော၊ ချောမွေ့သောဝယ်ယူမှုအတွေ့အကြုံကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်စတိုးဆိုင်များသည်အခြားနေရာများတွင်သွားနိုင်သည်။ နိုင် ကယ်နုတ်ပါ။
သူတို့၏တံခါးများကိုဖွင့်ထားရန်လက်လီရောင်းချသူများကအုတ်နှင့်မော်တာစတိုးဆိုင်၏မူလပုံသဏ္reာန်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားသင့်သည်။ စတိုးဆိုင်၌အခွင့်အလမ်းများတိုးမြှင့်ခြင်း၊ သူတို့၏ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ဝယ်လိုအားကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ စျေးဝယ်သူများအားနားလည်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြားကွာဟမှုကိုလျော့နည်းစေခြင်းအားဖြင့်လက်လီရောင်းချသူများသည် e-commerce ကုမ္ပဏီကြီးများကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံ။
Tags: ကလဲCushman & Wakefieldဒစ်ဂျစ်တယ်ကလေးမွေးစားခြင်းဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းခြေလျင် LockerJC ဒန်နီjcpenneyမောလ်များရုံးသုံးစတိုးဆိုင်များရေဒီယို shackလက်လီလက်လီဆန်းသစ်တီထွင်မှုလက်လီအရောင်းဆိုင်များSearsအားကစားအခွင့်အာဏာအဓိကကစားစရာကျွန်တော်တို့ကို r
Jon Croy ပါ
ဂျွန်သည်ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိချုပ်ဖြစ်သည် အတွင်းပိုင်း Point။ Point Inside သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံး၊ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်မိုးလုံလေလုံမြေပုံရေးဆွဲခြင်း platform ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
WordPress အတွက်သင်လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းအရာ - Avada